Malunga nathi-IMIT yeeNkonzo zeNkampani zeMoto
U-MAXIMA, olilungu leqela le-MIT, yeyona nto iphambili kushishino lokugcina izithuthi laseTshayina kunye nesona sixhobo sikhulu sokwenza izixhobo zokulungisa izixhobo zomzimba, indawo yemveliso eyi-15,000㎡ kunye nemveliso engaphezulu kweeseti ezingama-3,000. Imigca yokuveliswa kwayo igubungela umsebenzi onzima wekholamu, ukuphakamisa iqonga elinzima, inkqubo yokulungelelanisa umzimba, inkqubo yokulinganisa, oomatshini bokuwelda kunye nenkqubo yokutsala i-dent.
I-MAXIMA ejolise kubathengi yokunyusa umthwalo onzima isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso eyahlukeneyo yeemoto, izitishi zokugcina izithuthi zorhwebo kunye namashishini akhethekileyo enkonzo yezithuthi, athengiselwa i-USA, Canada, Australia, United Kingdom, France, Netherlands, Spain, Norway, Portugal, Austria, Switzerland, IRashiya, iBrazil, i-Indiya, i-Chile njl. Ngo-2007, i-MAXIMA yokunyusa umthwalo onzima yaqinisekiswa yi-CE. Ngo-2015, i-MAXIMA yokunyusa umthwalo onzima yaqinisekiswa yi-ALI, yaba yeyokuqala kwi-ALI eyamkelekileyo umenzi ophakamisa umsebenzi onzima e-China. Ezo ziqinisekiso zandisa ukuzithemba kwabathengi kwaye zinceda i-MAXIMA ukuba isebenzele abathengi basekhaya nabangaphandle.
Ukugcina izinto ezintsha kukulandela ngokungagungqiyo kuka-MAXIMA. Kwi-2020, umsebenzi onzima wokuphakamisa iqonga lomhlaba wakhutshwa emva kokuzama ixesha elide kunye nokuqinisekisa okuphindiweyo kunye nokuhlolwa. Ukuphakanyiswa kweqonga elisemhlabeni kukwafumene isatifikethi se-CE ngempumelelo. Ngaphaya koko, isebe lethu le-R & D likwaphucule ukuphakamisa ikholamu ngomsebenzi oshukumayo ngokuzenzekelayo. Kuya kuba lula ngakumbi ukuhambisa iikholamu ngamandla amancinci kunye nexesha. Lo msebenzi uya kukhethwa kwimveliso ezayo.
I-MAXIMA ingumnini wokugcina ulungelelwaniso lweMoto kunye neZiko leMilinganiselo yeR & D yeZiko elinamandla kakhulu kwiziko le-R & D kunye neziko ledatha lokulungisa umzimba. Ngaphandle koko, i-MAXIMA ikwanelona ziko liphezulu kunye nelona likhulu kakhulu kwiziko loqeqesho lokulungisa umzimba. Ukuxhotyiswa ngemveliso ekhokelayo yasekhaya, izixhobo zokuhlola, amandla amakhulu eR & D, abasebenzi abaneziqinisekiso eziphezulu kunye neenkqubo ezifanelekileyo, ezilawula imveliso, umgangatho, ukunikezela kunye nenkonzo yokuthengisa.
Njengengcali ekhokelayo kwilizwe jikelele yesisombululo sokulungiswa kwezithuthi kunye nesisombululo sokulungiswa kweengozi, i-MAXIMA iya kubonelela ngezixhobo ezikhuselekileyo, ezinobungcali neziphambili kunye nezixhobo, incede abathengi ekusombululeni iingxaki, bandise ukusebenza kakuhle kwaye banciphise amandla emisebenzi.
Ukuboniswa kwegumbi lesampulu